Ahoana ny fomba hisafidianana ny ambainy PVC strip?
Ny mari-pana ara-dalàna dia manome soso-kevitra ny lambam-baravarankely Standard PVC. Ny mari-pana ambany dia manome soso-kevitra ny lambam-baravarankely Polar PVC. Ao amin'ny atrikasa dia manome soso-kevitra ny lambam-baravarankely Welding PVC. Ao amin'ny trano fanatobiana entana dia manome soso-kevitra ny lambam-baravarankely Ribbed PVC. Ho an'ny voafantina bebe kokoa, mifandraisa aminay. Fampiasana sy tombontsoa mahazatra an'ny PVC Strip ...
Fampiharana ny PVC
Ny PVC no thermoplastic tanjona voalohany indrindra ary manana fampiharana marobe. Izy io no karazany faharoa amin'ny vokatra plastika faharoa izay faharoa amin'ny polyethylene ambany. Ny vokatra dia azo zaraina ho vokatra mafy sy vokatra malefaka: ny fampiharana ny vokatra mafy indrindra dia ny pip ...
Polyvinyl Chloride (PVC) dia iray amin'ireo polymer thermoplastic be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao (eo anilan'ny plastika vitsivitsy be mpampiasa kokoa toa ny PET sy PP). Izy io dia plastika fotsy sy marefo (alohan'ny fanampiana ny plastika). Efa ela be ny PVC noho ny ankamaroan'ny plastika ha ...